संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अक्सिजन अभाव उच्च हुनसक्छ : सञ्चालक न्यौपाने | चितवन पोष्ट दैनिक
दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि अक्सिजनको माग ह्वात्तै बढेको छ। आफ्नै प्लान्ट चलाएका अस्पतालहरुले पनि निजी क्षेत्रबाट अक्सिजन ल्याएर संक्रमितको उपचार गराउनुपरेको छ। यही गतिमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाने हो भने अबको केही दिनमै अक्सिजन अभाव हुन सक्ने संभावना पनि उच्च बन्दै गएको छ। भरतपुर अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले आफ्नै प्लान्ट चलाए पनि व्यावसायिकरुपमा निजी क्षेत्रबाट चलेको अक्सिजनको प्लान्ट ओम सञ्जीवनी इन्टरप्राइजेज मात्रै हो।
देशैभर अक्सिजनको माग बढेपछि आफ्नै प्लान्ट चलाएका अस्पतालले समेत निजी क्षेत्रकै भर पर्नुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा थप अक्सिजन प्लान्टबारे सम्भावना के छ र कत्तिको सहज छ भन्ने विषयमा ओम सञ्जीवनी इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक निरञ्जन न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
१) पछिल्ला दिनहरुमा चितवनमा अक्सिजनको माग र खपतको अवस्था कस्तो छ ?
हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि माग बढ्दै गइरहेको छ। धन्न अहिलेसम्म माग धानिरहेका छौँ । पछिल्ला केही दिनयता बाहिरी जिल्लाबाट पनि माग अत्यधिक आउन थालेका छन्। तर, हामीले चितवन जिल्ला र जिल्लाकै अस्पताललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ। किनकि आफ्नै जिल्लाका बिरामी अक्सिजन नपाएर छट्पटिइरहेको हेर्न सक्दैनौँ।
२) आफ्नै प्लान्ट चलाउँदै आएका अस्पतालबाट कत्तिको माग छ ?
अस्पतालहरुले व्यावसायिकरुपमा सञ्चालन गरेका होइनन्, उनीहरुले आफूलाई चाहिने र आफ्नै अस्पतालमा प्रयोग गर्ने गरी प्लान्ट चलाएका हुन् । तर, अहिले त्यसले पनि नपुगेर हामीले दिनुपरेको छ। मागअनुसारको अक्सिजन दिँदा पनि कतै नपुग्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालिसकेको छ।
३) तर, साना अस्पतालले हामीलाई अक्सिजन नै दिएन भन्ने गुनासो गर्दै आएका छन् नि ?
हामीले यसलाई दिने र उसलाई नदिने भनेर तोकेका छैनौँ। किनकि यस्तो बेलामा यहाँका अस्पताललाई नदिएर कसलाई दिनु ? त्यसैले चितवनका निजी अस्पताललाई यो भ्रमबाट बाहिर रहन म आग्रह गर्छु। जिल्ला प्रशासनसँग पनि कोरोना संक्रमितको उपचार गराउँदै आएका अस्पताललाई प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा हरेक दिन समन्वय भइरहेको हुन्छ। हामीले विभिन्न कारखानामा रहेका सिलिन्डर पनि फिर्ता मागेर कसरी हुन्छ सहज बनाउने वातावरण मिलाइरहेका छौँ। तर, फरक के हो सबै अस्पतालले अस्पतालमा प्रयोग हुनेभन्दा बढी सिलिन्डर लगेर होल्डमा नराखिदिओस् ।
४) सामान्य अवस्था र अहिलेको अवस्थामा उत्पादन र खपतमा के फरक छरु
हामीले हप्तामा तीनदेखि चारदिनसम्म मात्रै प्लान्ट चलाउँथ्यौँ। तर, अहिले सातैदिन चौबीसै घन्टा चलाउनुपरेको छ। हाम्रो जिम्मा चितवनलाई मात्रै हेर्ने नभई बाहिरका जिल्लाई पनि हेर्नुपर्छ। तर, अहिले चितवन जिल्लालाई नदिई बाहिरी जिल्ला पठाउन सकिने अवस्था छैन।
५) बाहिरी जिल्लाबाट कत्तिको माग आएको छ ?
अत्यधिक छ। एउटै एम्बुलेन्सले चार पाँचवटा सिलिन्डर लिएर आइरहेका छन्। तर, हामीले जति पनि सिलिन्डर ल्याउँदैमा सबैलाई दिन सक्ने अवस्था छैन। यो समयमा कालो बजारी पनि हुन सक्ने प्रवल संभावना रहेको हुँदा हामी त्यसतर्फ पनि सचेत छौँ। उनीहरुले मागेअनुसारको सिलिन्डर दिएर पठाउने हो भने ती सिलिन्डर सही ठाउँमा प्रयोग भएको छ कि छैन ? बढी पैसा लिएर पो बेचिरहेका छन् कि भनेर हामीले अनुगमन र कारवाही गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। त्यसैले बिरामी नै लिएर आउनेलाई पठाएका छौँ। यत्ति बुझ्दा हुन्छ कि चितवन जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ।
६) चितवनमा निजी क्षेत्रबाट कति अक्सिजन उत्पादन हुन्छरु
व्यावसायिकरुपमै प्लान्ट चलाएको त हामी मात्रै हौँ। जिल्लामा प्लान्ट सञ्चालन गर्दै आएका अस्पतालको उत्पादनले पनि नपुगेर हामीलाई माग पूरा गर्दै आएका छौँ। हामीसँग दैनिक ५०० ठूलो सिलिन्डर भराउन सक्ने क्षमता छ।
७) प्लान्ट चलाउने जनशक्तिको अवस्था के छ चितवनमा ?
योचाहिँ गम्भीर खालको प्रश्न हो। दक्ष जनशक्ति यहाँ छैन। र, भए पनि नेपालको दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुन्छन्। जसले गर्दा हामी अहिलेसम्म आफैँ निर्भर हुन सकेका छैनौँ। कम्तीमा ६र७ वर्ष प्लान्टमा बसेर काम गर्ने व्यक्ति दक्ष बन्न सक्छन्। त्यसको लागि धैर्यता चाहिन्छ। तर, नेपालीमा त्यो धैर्यता पाइँदैन, त्यसैले हामीले पनि भारतबाट जनशक्ति ल्याएर प्लान्ट चलाइरहेका छौँ। प्लान्ट चलाउँदै गर्दा नेपाली दक्ष जनशक्ति उत्पादन नै नभएको होइन, यहाँ काम सिकेका युवा जोसुकै भए पनि विदेशमा गएर पसिना बगाउन खुसी हुन्छन् यहाँ बस्नुभन्दा। थोरै काम सिकेपछि विदेश जानैमा बल गर्ने परिवाटीले स्वदेशी जनशक्ति पाउन मुस्किल छ। प्लान्ट चलाउँदै गर्दा हामीले चार जनालाई दक्ष बनायौँ। तर, आज उनीहरु सबै विदेशमा छन्।
८) भनेपछि नयाँ प्लान्ट चलाउन सहज छैन ?
पहिलो कुरा दक्ष जनशक्ति नै पाइँदैन। दोस्रो कुरा प्लान्ट सञ्चालन गर्न चाहिने यन्त्र उपकरण सबै भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। सबैकुरा भारतबाट ल्याउनुपर्ने भएपछि सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो छ। त्यसमाथि भन्सारमा आएरै महिनौसम्म अड्काइदिन्छ। हामीले पनि यो प्लान्ट चलाउनको लागि सामानकै लागि मात्रै चार महिना कुरेका हौँ, त्यो पनि बाटोको समय मात्रै। त्यसैले निजी क्षेत्रबाट हत्पति चलाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। सरकारी तवरबाटै पहल भयो भने पनि कम्तीमा एक महिना लाग्छ। त्यसैले अहिलेको यो अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट सम्भव कम छ, यसको लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ। अहिले प्लान्टका सबै सामान महँगो पनि भएको हुँदा भोलि त मूल्य घट्छ, त्यसैले महँगोमा ल्याएर सस्तोमा बेच्न निजी क्षेत्रले सक्दैन।
९) सिलिन्डर दिनुपर्‍यो भनेर दबाब कत्तिको आउँछ ?
अहिलेको महामारीमा कति रात त राम्रोसँग निदाउन पनि पाएको छैन। अरुबेला नचिनेका मान्छेको अगाडि पनि अक्सिजनले चिनाएको छ। त्यसैले जिल्लाभित्र र बाहिरबाट उत्तिकै दबाब आइरहेका छन्। हाम्रो क्षमता कति हो, सिलिन्डर छ कि छैन भनेर बुझ्दैनन्, खाली हामीलाई जसरी हुन्छ, यति सिलिन्डर चाहियो भनेर अर्डर गर्नेको भीड नै लागेको छ।